Qoraalkii Odeith ee cajiibka ahaa iyo 'hooskiisii ​​3D' | Abuurista khadka tooska ah
Odeith ee xiisaha '3D hooska' xarafkiisa
La xorriyadda aad haysato Adoo ku rinjiyeeynaya xarafka booska lagu rinjiyeeyay, waxay ku siin kartaa faa'iidooyin gaar ah farshaxanada ka hela shiraaca ugu wanaagsan ee ay ku isticmaalaan darbiyada. Meelahani waxay noqon karaan gidaarro ama qaybo ka mid ah guryaha la dayacay oo ku habboonaan kara saadaasha farshaxanka ee xitaa leh qoto dheer ama 3D.
Tani waa waxa ku dhacaya farshaxanka ku qoran sawirka 'ODEITH', oo ah farshaxan reer Burtuqiis ah oo awood u leh inuu beddelo saddex darbi oo ku yaal meel saddex-geesood ah taas oo aan ka heli doonno sawirro taxane ah oo umuuqda inay ka soo baxayaan darbiyada si ay ugu siibtaan aragtideena si ay noo khiyaanayn doonaan iyagoo keenaya saameyn dhab ah.
Awooddaas beddelka meelaha bannaan waa mid aad u soo jiidasho leh iyo isku dhafan ee xubno sawir kala duwanSida ay u noqon karto jiir kale oo sawir la sameeya haweeneydaas, oo leh cod aad u macquulsan, ayaa noo horseedeysa in lagu jahwareeriyo goobta ka hor inta aan is aragno.
Odeith wuxuu leeyahay a shaqooyin badan sida muraayadaha aan ku aragno kala duwanaansho aad u weyn iyo hibo weyn oo ku saabsan rinjiyeynta sida aad u arki karto markii aad waqti ku qaadato inaad aragto mid kasta oo ka mid ah muraayadaha ama qoraallada u guuraya meelaha kala duwan ee adduunka.
Farshaxan 40 jir ah oo ku dhashay Damaia, Boortaqiiska, oo haystay dawadiisa buufin ugu horeysay markii ugu horeysay bartamihii 80-meeyadii, sidaa darteedna 90-meeyadii wuxuu bilaabay wadadiisii ​​farshaxanimo xaraf ah ilaa maantadan aan ku qanacno qaabka gaarka ah ee aragtida iyo hooska magac la mid ah «3D hooska». Midkan, curinta, muuqaalka muuqaalka ama sawirrada, oo lagu daray maxay yihiin farriimaha, waxay ku milmayaan inta udhaxeysa xaqiiqada iyo taabashada gaarka ah ee kor ku xusan.
Waxaad haysataa websaydhkaaga laga soo xigtay. Farshaxan kale oo raadinaya qoto dheer shuqulladiisa, inkasta oo qaab kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Odeith ee xiisaha '3D hooska' xarafkiisa
Astaamaha 'Instagram' ee dhiiri gelin doona hal-abuurkaaga